Bacopa Caroline wobuhlengikazi, zizalela, izimo yeziboshwa. izinhlobo Bacopa
Bacopa Caroline kuyinto isitshalo zisetshenziswa nge inkumbi, amaqabunga kanye namanzi isakhiwo pulpy. Kumnandi hhayi kuphela e usawoti, kodwa futhi namanzi amadamu emvelo kanye yokufakelwa. Yingakho Bacopa has isimo omunye izitshalo ezivame kakhulu kuleli emachibini okugcinwa zasolwandle. abajwayelene Okuningi nale flora ezithakazelisayo.
Caroline ngokuvamile Bacopa ikhula ngaphandle kwe aquarium, futhi amahlumela alo eziqhakaza at kwamanzi. Inflorescences kuhluke obucayi luhlaza onsomi. Izimbali ezincane amacembe eziyisihlanu.
Isiqu e-Karolinska Bacopa eside, luhlaza okotshani. Amahlamvu isendaweni Isiqu ngokulandelana okuphambene, okusho ngazimbili. Ngenxa isitshalo yayo undemanding is kahle okusakazwa ku nemibandela aquarium. Uma kusetshenziswe amadamu yokufakelwa futhi khona izimo ezifanele uyakwazi sikhule futhi ezala unyaka wonke.
Lesi sitshalo okhetha amanzi ezithambile. Ngenhla evamile ubulukhuni amanzi e aquarium ngokuvamile kuholela ukusonteka of ngeziqu namaqabunga alesi simila. Ukuze ukukhula Bacopa Karolinska akunandaba indlela endala amanzi aquarium. Into esemqoka - ukuze babe ukukhanya kuhle, okungcono elangeni.
Bacopa ekhula kahle ithangi ngenkathi sigcina lokushisa lamanzi ezingeni lamadigri kusuka 20 kuya 26. Kodwa ngisho ngaleso ongaphakeme lokushisa isitshalo ngokuvamile akafi, kodwa eyeka ukukhula nasekuvezeni izithombo zaso ezintsha kuphela. Ukuze zikhule kahle futhi okunamathiselwe phansi usuku aquarium ukukhanya Bacopa kumele kutsatse lema-awa la eziyishumi.
Bacopa Caroline inohlelo kunalokho ebuthakathaka impande. Ngakho-ke, lapho okuqukethwe yayo izimo ithangi ukugcwaliswa edingekayo ngokulinganisela evundile substrate phansi, mhlawumbe ngesisekelo ubumba, isihlabathi futhi amatshe. Njengoba isitshalo amandla, khona-ke kwanele izinto awela phansi namanzi mass ngenxa yomsebenzi esibalulekile izinhlanzi kanye nezinye izakhamuzi zaseMpumalanga aquarium ukuthi.
Okusakazwa Bacopa uCaroline ngokumshaya ukuxhumelela stem. Lapho wena ngena aquarium isitshalo amahlumela abatshalwé substrate, ngaphandle kokulinda ukuba ekuqaleni izimpande. Ekuqaleni Bacopa kungalindelwa kwanda encane iziqukathi ivolumu ekukhanyeni elikhanyayo, ogcina lokushisa ezidingekayo futhi esidi aqueous abezindaba izindlela.
Izinzuzo Bacopa ezikhulayo
Kuphethe design ka aquarium ngezandla zabo, kubalulekile ukunquma kusengaphambili ne izitshalo kunesidingo. Omunye okulula ukunakekelwa kakhulu futhi kakhulu zinhlobo undemanding semvelo sezimila kungaba ngokuqondile Bacopa uCaroline. ekukhuleni kwayo kuqhathaniswa kancane kanye nekhono ngenkuthalo yokuzalanisa kuyinto yokuthola yangempela kubalandeli yobuciko aquarium emhlabeni wonke.
Khulisa izitshalo kungaba cishe kunoma iyiphi substrates, kwabantu okuyinto kwanele ukubamba impande. Ukuze okubili Bacopa Karolinska indlela yokufakelwa, ngokwanele ukuba usike eziqongweni ngibatshale emhlabathini. Nquma samahlumela akusho ukulimaza izitshalo, ngisho kunalokho kuholela nakakhulu branched-eziqongweni.
amanzi Izinhlobonhlobo Bacopa
Omunye kwezinhlobo ezivamile plant ngokunembile Bacopa uCaroline. Kodwa njengoba sekushiwo ngaphambili, lesi flora is ikakhulukazi intela ngemibandela yeziboshwa, kahle eveza ithandwe phakathi hobbyists bakukhonzile.
Olunye uhlobo ezivamile - Bacopa Australian, ekhaya lapho, naphezu igama, kuyinto eNingizimu Melika. simila landile endle ngamanzi agobhozayo futhi zilwane ezincane kunazo zonke ngezinhlobo zayo. Nokho, Bacopa Australian futhi bazizwa kakhulu endleleni nemibandela yokufakelwa kasawoti kanye okugcinwa.
Madagascar Bacopa uncamela nemibandela ukusakaza fresh, izimfunda, emachibini amancane kanye namachibi ahlanzekile. Inani elikhulu zezitshalo kungabonwa ezikhulayo ogwini lwasenyakatho-imizimba amanzi Madagascar.
Kuphethe Umklamo aquarium ngezandla zabo, okuthandayo kumele inikwe lesi sitshalo futhi njengoba Bacopa monnieri, okuyinto ekhona cishe wonke amazwekazi. Ngokuvamile kwenzeka izimbuku, engajulile, imifula kanye namachibi rich namaminerali substrate.
Peristolistnaya Bacopa Kuthi kwesama zazo kwezinye izitshalo yalolu hlobo, osuvele liphenye kusukela igama ngokwalo. Ihlangana ukuntweza peristolistnoe isitshalo, ikakhulukazi emanzini aseNingizimu Melika. Mhlawumbe yilesi sizathu esenza lolu hlobo Bacopa akakabi njengoba kabanzi phakathi abalandeli okugcinwa kanye amadamu yokufakelwa.
Ummese Uzbek: kufanele zibe
Gaitán ukuwela (lace): izinhlobo kanye nemithetho Ukukhetha
Multivarka. 3 amalitha - umqulu ukuthi kungaba eliphezulu umndeni encane
Ukukhetha giroskuter. Ukubuyekeza, amathiphu okukhetha nokulaywa
Isilinganiso radiators bimetallic ngoba emaxhaphozini izindlu
Adygea: izikhangibavakashi adalwe Imvelo uqobo lwayo
Ingabe baxoxe - ukuthi isigaba singaphelelwa isikhathi?
Imikhiqizo ukunciphisa cholesterol egazini
Cutlets kusuka amaqanda: zokupheka
Umnyaka umhlalaphansi ngabesifazane Kazakhstan yanquma ukwandisa
Sula mayelana carbamazepine: umhlahlandlela emfushane